Libera: iyo imba nyowani ye IRC hurukuro dzevanhu veLinux | Linux Vakapindwa muropa
Ndaiwanzotaura zvakawanda kwemakore mazhinji. Idzo dzaive dzimwe nguva apo MSN yaive yakaita seWhatsApp yazvino, iyo yaingopihwa kune vamwe vazivikanwe kana vanhu vatinoziva pamambure uye takavada. Mazuva ano, mazhinji mapoka anosarudza dzimwe nzira dzakadai seTeregiramu kana Discord, asi nharaunda yeLinux ichiripo mune inozivikanwa se IRC chats. Kuve zvishoma kure nenyika iyoyo, pakutanga ini ndakanga ndisina kubhadhara zvakanyanya kune idzi nhau, asi chatova chokwadi icho icho nharaunda yeLinux iri kutamira kuLibera.
Kusvikira svondo rino, vazhinji vacho vaishandisa Freenode. Pakutanga kwesvondo rino pandakaona paTwitter kuti Xubuntu anga achirega freenode kuva nehurukuro dzavo muLibera.Chat, asi kune rimwe divi nekuti ini handisi mushandisi werudzi irworwo rwekutumira mameseji uye, kune rimwe divi, nekuti iko kunhuhwirira kweUbuntu kwandinofunga kuti hakusi kufarira munharaunda, ini handina 'teerera zvakanyanya. Gare gare akataura zvakafanana Ubuntu, kuitira kuti mamwe mavhenekeri akateedzana nguva pfupi yapfuura. Nhasi ndiani atumira chinyorwa mune izvi chave Fedora.
Libera.Chat ndiyo yatove imba nyowani yeUbuntu neFedora
Mukutaurirana kwese kwepamutemo kwandakaverenga, mapurojekiti anga ane hunhu uye angotaura nezve "shanduko yemitemo" nezvimwe zvakadaro, asi zvisiri pamutemo iyo nyowani nyowani yakashoropodzwa zvakanyanya, ichitovimbisa kuti Freenode yakanga yagara nemazita eiyo chaiwo Ubuntu chiteshi. Icho chinhu icho ini pachangu ndisina kukwanisa kusimbisa, asi chimwe chinhu chiri kuitika, seProjekti Fedora inoti:
Kubva payakatanga, iyo Fedora Project yakashandisa iyo IRC freenode network kune yedu projekiti kutaurirana. Nekuda kwekuchinja kwakasiyana siyana kwazvino kunetiweki, iyo Fedora Project iri kufambisa yedu IRC kutaurirana kuLibera.Chat.
Kune vashandisi venetiweki, zvinyorwa zvese zvandakaverenga zvinovimbisa kuti zvese zvichaenderera sepakutanga, asi kuti uchafanirwa kunyoresa zvakare muLibera.Chat. Kana iri remangwana reFreenode, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vanoti iripo nekuda kweFOSS (yemahara uye yakavhurwa sosi software), uye iyi nzira haizoiti chero chakanaka. Kana zvikaitika, imhaka yekuti kwave kuine "kutenga kunotyisa" uye shanduko huru iyo nharaunda yaisada. Kana zvese zviri sezvavari kupenda, Freenode akafa, rarama kwenguva refu Libera. Chat.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Linux nharaunda inosiya iyo Freenode network (IRC) ichida Libera